RelateIQ: A Relationship Intelligence Kwadoro CRM | Martech Zone
Wenezde, August 19, 2015 Wednesday, October 28, 2020 Douglas Karr
RelateIQ bụ CRM dị mfe nke na-ejikọ na igbe mbata email gị iji gbakwunye na-akpaghị aka ma hazie data sitere na isi iyi data ọ bụla. RelateIQ na-akpakọrịta na akpaghị aka mekọrịta data sitere na ozi ịntanetị gị na mbata gị, kalịnda gị, na oku ekwentị gị (ọ bụ ezie na ngwa mkpanaka ahụ) iji kpochapụ ntinye data ntinye aka na CRM. Ọ dị oke elu na ọ bụrụ na mmadụ ezitere gị ozi ma ị zaghị ya, ha ga-emepụta ihe ncheta maka gị na akpaghị aka.
RelateIQ na-ewepu ntinye data ntinye aka site na ijide ozi ịntanetị gị, nzukọ, na oku ekwentị gị metụtara azụmahịa gị. Atụmatụ ọgụgụ isi, dị ka Aro aro na Ubi nke ọgụgụ isi, were ọrụ nkwukọrịta ahụ ma jiri ya mee ka ndị otu gị na-arụpụta ihe.
Ikpo okwu a nwekwara modul akuko banyere oru iji nye oru, uto ahia, igba oso ahia na ikwunye akuko.
RelateIQ jikọtara na MailChimp, Pardot, HubSpot na Zapier ma nwee ndọtị Chrome zuru ezu.
Tags: CRMọgụgụ isinjikwa mmekọrịta ndị ahịaRelateIQọrụ ire erenyocha ahịapipeline ahịaahịa akụkọọsọ ahịa